Shkodran Mustafi sidee isku yihiin Salaada iyo Soonka Qur aankase Mayaqaan?+Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shkodran Mustafi sidee isku yihiin Salaada iyo Soonka Qur aankase Mayaqaan?+Sawirro
Xiddiga Muslimka ah ee difaaca uga ciyaara Arsenal iyo xulka qaranka Germany ee Shkodran Mustafi ayaa ka hadlay arrimo la xidhiidha caqiiqadiisa diinta Islaamka, saamaynta ay ciyaaruhu ku yeeshaan salaadaha iyo soonka iyo arrimo kale.
Mustafi oo £35million ay Arsenal kaga soo iibsatay Valencia, ayaa loo arkaa in uu yahay nin leh hibo ciyaareed iyo kartisii difaacyahankii caanka ku ahaa kooxdaas ee Tony Adams.
Muslim-nimadiisa shaki kuma jiro, in uu caqiiqadiisa ku adag yahayna wakhti hore ayey warbaahintu faallaysay, markii isagoo shir jaraa’id ku qabanaya Valencia uu diiday in uu warbaahinta la hadlo iyadoo quraarad khamri ah ay hor taallo, taas oo khasab ay kaga dhigtay kooxdu.
Mustafi oo 24 jir ah ayaa dhalasho ahaan waxay qoyskiisu ka soo jeedaan waddanka Albania.
Sida ay qortay jariidadda The Sun ee ka soo baxda waddanka Ingiriiska Mustafi waxa uu dhulka iska dhigay quraaradda, laakiin nin shaqaale ah oo ag-taagnaa ayaa soo qaaday oo miiska soo saaray, maadaama ay Valencia ku heli jirtay lacagta ugu badan ee gasha xayeysiiska. Muran kaddib, Mustafi waxa uu ogolaaday in dhinac uun looga leexiyo. Waxa arrintan u raacday, markii uu u ciyaari jiray Everton, maalin ay guul wanaagsan gaadheen xiddigaha kooxdu, ayaa ay qabsadeen xaflad damaashaad ah, halkaas oo Mustafi loo fidiyey quraarad khamri ah, taas oo jawaab adag uu ka bixiyey.
Mustafi oo ka hadlaya arrimahan waxa uu yidhi: “Aakhirkii dagaalka kumaan guuleysan, waad ogtahay. Ma doonayo in ay dadku u fikiraan inaan khamriga xayeysiinayo”
Isaga oo si gaar ah uga hadlaya wixii uu ka yeelay shirkii jaraa’id ee khamriga la hor dhigay, waxa uu yidhi: “Aakhirkii quraaraddii halkeedii ayey taagnayd, laakiin kooxdu raalligelin ayey isiisay sababtoo ah, waxay fahmeen in diinta Islaamka aan sinaba looga ogolayn maandooriyaha. Wakhtiganna Valencia way ixtiraamtaa caqiiqada ciyaartoyga.”
Mustafi shantiisa wakhti ee Salaadda wuu tukadaa maalin walba, isaga oo faahfaahinaya muhiimadda Islaamnimadu leedahayna waxa uu yidhi: “In aan Muslim ahaado, aad ayey muhiim iigu tahay, wax kastana way iiga muhiimsan tahay, inkasta oo mararka qaarkood safarradu ay igu adkeeyaan in Salaadaha aan wakhtigooda tukado.”
Tartanka ciyaaraha Euro ee dhowaanta la qabtay, ayaa uu dhibaato kala kulmay markii ay ku beegmeen bishii Ramadaan, waxaanu yidhi isagoo ka hadlaya: “Tartankii Euro dhibaato ayuu igu ahaa, sababtoo ah waxa uu ku beegmay badhtamaha bishii Ramadan, suurtogalna iimay ahayn in aan xaddido cuntada iyo cabbitaanka. Laakiin ciyaartoy ahaan, waxaan ogaa in aanay cudurdaar noqon karaynin in aan arrintan ka cawdo.”
Qur’aanka ayuu si fiican u bartay, laakiin diimaha kalena uu wax ka bartay, waxaanu yidhi: “Si fiican ayaan u bartay Qur’aanka, laakiin sidoo kale diimaha kalena waan bartay. Qur’aanku waxa uu kuu dhoweynayaa ambiyada, masaajidka ayaanan tagaa salaadaha. Diintayda ayaa wax walba ii ah iyo xirfaddayda. Aad ayey ii caawisaa diintaydu.”